देशभर आज साउने संक्रान्ति पर्व मनाइँदै – सुदूरखबर डटकम
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder July, 17 2019
काठमाडौं, साउन १ । आज देशभर साउने संक्रान्ति पर्व मनाईंदै छ । सौरमान अनुसार सूर्य दक्षिणतिर सरेर ठीक कर्कट रेखामाथि पुग्ने हुनाले यस दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ ।
कृषि प्रधान देशमा मुठी खाई मुरी उब्जाउने भन्ने कथनअनुसार असार महिनाभर गरेको खेतीपातीको कामबाट थकित किसानले हिलोमैलो पखाली घरपरिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी भोज खाने चलन छ ।
असारे हिलोका कारण फैलिन सक्ने रोगबाट जोगिन लुतो फाल्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाउन थालिएको हो । यस दिन कागती, निबुवा, अम्बा, अनार, नासपाती आदि फलफूल चढाएर कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्नाले दाद, लुतो, खटिराजस्ता चर्मरोगको प्रकोपबाट बच्न सकिने विश्वास गरिन्छ ।
कुकुरडाइनो, कागभलायो, कुरिलो, पानीसरो, पुरेनी, गलेनी लगायतका औषधीय वनस्पति बालेर बेलुकी घरको आँगनबाट चारै दिशामा अगुल्टोबाट लुतो फ्याँक्ने चलन छ । लुतो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शंख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढिकी कुट्ने र एकछिन घरको ढोका बन्द गर्ने गरिन्छ ।
महिलाहरु साउने संक्रान्तिका दिनदेखि एक महिना सौभाग्यको प्रतीक हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउनाका साथै शिवलाई प्रसन्न पार्न सोमबारे ब्रत बस्छन् । यो महिनाभर शिवजीका भक्तजनहरु बोलबम यात्रामा निस्कने पनि गर्दछन् ।
काठमाण्डौ-तराई मधेश जोड्ने फास्ट ट्र्याक २०८१ सम्म बनी सक्ने सेनाको उद्घोस
त्रिविका कर्मचारीको खैलाबैला ! बिद्यार्थीबाटै घुस लिई प्रश्नपत्र देखाउने बिरुद्ध मुद्दा
सघन उपचारको लागि राजधानी काठमाण्डौंमा आईसीयू ‘बेड चार्ज’ कुन अस्पतालमा कति ? जानकारी लिनुहोस
कोहलपुरमा दिउसो तीन वजे देखि कर्फ्यु , सुरक्षित ठाउँमा बस्न सर्वसाधारणलाई प्रहरीको आग्रह